The chirongwa chikwata mashoko hurongwa ouinjiniya Chirongwa nani Motor rakaumbwa - China Shandong Better Motor
On June 26, basa chikwata mashoko hurongwa ouinjiniya Chirongwa nani Motor rakaumbwa. Shandong Sanjiang Electric Engineering Co., Ltd ari mutariri mazano uye kushanda basa iri. Zvinonzi aronga kuita kutongwa mashandiro pakupera Sep. Now Sanjing Electric Engineering chikwata kuita zvinokosha kuongorora.
The vanonyanyonangwa chirongwa ichi kuti chamber unhu kuburikidza mês hurongwa. Kuziva yokuronda vanhu, muchina, zvinhu, mutemo.
Mês Hurongwa anogona kuona Zvakanyanya Kunaka Panguva Yepamuviri utariri nemashoko wokushandura kubva pakugovera kuti kupedzisa zvigadzirwa.
Creat imwe Anwendung pafoni, zvekuti yaiona matanda anogona moniter kurimwa ezvinhu panguva pose uye chero nguva achishandisa Anwendung.
Tichakurukura mberi basa nekukurumidza, kuvandudza kurimwa kunyatsoshanda uye zvemakwikwi kugona.